सभामुखमाथि देखाइएको ओली हठ ! | Safal Khabar
आइतबार, ०३ असोज २०७८
सभामुखमाथि देखाइएको ओली हठ !
मंगलबार, २९ भदौ २०७८, १० : ३६
काठमाडौं । एउटा नेपाली उखान छ ‘केले चाउरिस मरिच आफ्नै कर्मले । ठीक यस्तै छ, अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको हालत । अध्यक्ष केपी ओलीको अहंकारी, स्वेच्छाचारी र निरंकुश शैलीलाई बेलैमा सच्चाउन नसक्दा अहिले एमाले आफैमा चाउरिएको छ । तर पनि ओलीको साथबिना आफ्नो भविश्य सुरक्षित छैन कि भन्ने भयमा बाँचिरहेका एमालेका नेताहरु ओलीको एकपछि अर्को गल्ती, अहंममा पनि आँखा चिम्लेर बसिदिने र जे गर्दा पनि चुपचाप साथ दिने मनोवृत्तिका कारण एमाले आज ओरालो लागेको लाग्यै छ ।
अवको चुनावमा एमालेले आफूलाई मत दिन के मुखले जाने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ । एमाले र माओवादीले देशभित्र स्थिरताको लागि पनि वामपन्थीहरुलाई मत देउ भन्दै गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावमा गठवन्धन बनाएर जनताका बीचमा गएका थिए । बामपन्थी जनमत बलियो रहेको तर छरिएर रहँदा कांग्रेस लगायत शक्तिहरुले बेला बेला सरकारको नेतृत्व लिने अवस्था आउनु र पटकपटक सरकार बनाउने र भत्काउने खेलको गोलचक्करमा मात्र लागिरहनु पर्ने परिस्थिति जन्मेपछि स्थिरताका लागि एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर चुनावमा मत मागेका थिए ।
जनताले पनि विश्वासका साथ एमाले माओवादी गठवन्धनलाई मत दिए । झण्डै दुई तिहाई मत वामपन्थी गठवन्धनलाई जनताले दिए । चुनाव पछि उनीहरुले एउटै कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने गरी पार्टी एकता समेत गरे । अवको २०–२५ वर्ष देशमा कम्युनिष्टले सरकार चलाउने भए भन्ने आम जनताले अपेक्षा गरेका थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री भए ।
तर ओलीले चुनावी प्रतिवद्धता अनुसार घोषणापत्रमा टेक्नै चाहेनन् । उनी सत्तामा पुगेपछि निरंकुश बन्दै जान थाले । स्वेच्छाचारी ढंगले उनले काम गरे । पार्टीसाग उनले कुनै सल्लाह, परामर्श गर्ने चाहेनन् । आफ्नो गुट र आफनो जयजयकार गर्ने, पार्टीभित्रकै अन्य नेतालाई गाली गर्ने नेता कार्यकर्ता छानी छानी राज्यसंन्यत्रमा संरक्षण गर्ने नीति ओलीले लिए ।
अन्ततः पार्टीले उनलाई सच्चाउने प्रयास गर्दा उनले संविधान, ब्यवस्थामाथि नै धावा बोल्ने गरी जननिर्वाचित संसद अवैधानिक रुपमा विघटन गरे । त्यो पनि एकएक पटक मात्र होइन, अदालतले त्यसरी संसद विघटन गर्न नपाउने फैसला सुनाए पनि उनले दोहो¥याएर फेरि पनि संसद विघटन गरे । आफूबाहेक अरु प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आउन नसक्ने भन्दै आउन खोजे कुर्सी नै भाँचिदिने जस्ता भाषा प्रधानमन्त्रीको आसनमा बसेर ओलीले दिए । राष्टपति जस्तो गरिमामय पदमा बसेकी विधादेवी भण्डारीसम्मलाई उनले मामुली कार्यकर्ता झै आफनो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै गए । वैध, अवैध जे पनि उनले राष्ट«पतिलाई गर्न लगाए ।
ससदमा १७४ सिटमा सुरक्षित रहेका ओली अन्तत एमाले माओवादी अलग गर्ने सर्वोच्चको फैसलासँगै १२१ मा सिमित भए । झण्डै दुई तिहाईवाट बहुमत समेत नपुगी १२१ मा खुम्चिदा सम्म उनमा चेत खुलेन । एमालेभित्रै माधव नेपाल र झलनाथ खनालजस्ता पार्टी नेतृत्व २७ वर्ष हाँकिसकेका नेताहरुलाई उनले पार्टबाट हटाउने चालबाजी चालिरहे । पार्टीमा उनको कार्यशैलीको आलोचना गर्नेप्रति अत्यन्त असहिष्णु बनेर ओलीले पार्टीबाटै धकेल्ने नीति बनाए ।
फलस्वरुप उनी संसदमा विश्वासको मत लिने बेलासम्म निक्कै खुम्चिए । उनी पदमुक्त भए । तर पनि उनले राष्ट«पतिलाई दुरुपयोग गरेर आफै सत्तामा बस्न अनेक तानाबाना बनिरहे । उनी जति सत्तामा रहन्छन्, उनले संविधान, ब्यवस्थाका किलाकाँटा झिनाँल्दै जान थाले । संविधानबादको रक्षा, ब्यवस्थाको रक्षाका लागि माओवादी केन्द्रलगायत शक्तिहरुले त्यसपछि उनको विकल्पको खोजी शुरु गरे ।
अन्ततः बहुमत संसदमा विपक्षीको पुग्दा समेत आफैसँग बहुमत रहेको जिकिर सहित राष्ट्रपतिलाई शक्ति दुरुपयोग गराएर सरकार छोड्न उनले चाहेनन् । अन्ततः सर्वोचच अदालतले उनलाई सरकारको गद्दीबाट निकाल्ने फैसल्ला सुनाइदियो त्यसपछि उनी वालुवाटारवाट बालकोटको बार्दलीसम्म पुगे । ४२ महिना सरकारको नेतृत्वमा बसेका ओलीले अहिले सरकार छोडनु परेको पीडा भूल्न सकेको छैन । उनी अहिले पनि त्यही सरकार छोड्नु परेको पीडाले बर्बराउन छोडेका छैनन् ।
अहिले एमाले विभाजित भएको छ । आफु प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले छुट्टिन खोजे आफै अध्यादेश ल्याएर बाटो खोलिदिने बताएका ओली अहिले त्यही अध्यादेशले पार्टी फुटाइदिएको भन्दै संसदमा मुर्छाइरहेका छन् । सभामुखमाथि आरोपित लगाउँदै उनले निशाना साधिरहेका छन् ।
उनकै पार्टीका नेता सुवास नेम्वाडले संविधानसभाकै बेला ५ महिनासम्म माओवादीले कारबाही गर्न पठाएको पत्रमा कुनै कारबाही प्रक्रिया तत्काल नचाली ५ महिनासम्म अल्झाएका सुवास नेम्वाडहरु अहिले माधव नेपाललगायत १४ सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको र आलटाल गरेको भन्दै सभामुखविरुद्ध संसदमा प्रस्तुत भइरहेको छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षीले सम्वादमा कुनै चासो नदिई एकोहोरो आफ्नै हठ देखाइरहेको छ । सम्वादका लागि सभामुखले ओली स्वयमलाई हटलाइनमा फोन गर्दा समेत ओलीले कुनै चासो नदिई सम्पर्कमा आउन चाहेका छैनन्। यसले प्रतिपक्ष कति असहिष्णु बनिरहेको छ भन्ने देखाएको छ ।
जसपा र लोसपाले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा मनाउदैं
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर होऔँ : ओली
राष्ट्रपतिद्वारा ९ सय ३ जनालाई विभूषण प्रदान
अबको सात महिनासम्म एमाले भत्किन्छ : झाँक्री
अखिल अध्यक्षमा सुनिता बराल चयन
५ सय २३ जनाको कैद कट्टा, ८ जनालाई आममाफी
कहिले खुल्छ दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ ?
एक दर्जन जलविद्युत् कम्पनीको सेयर आउँदै
दैनिक १० मिटर खनिन्छ थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग
आज इन्द्रजात्रा पर्व धुमधामसँग मनाइँदै
चितवन हत्या प्रकरण : प्लास्टिकमा शव पोको पारेर फाल्ने तयारी गर्दै थिए हत्यारा
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा साल्ट ट्रेडिङ्गको व्यापार खोस्ने दाउ यसरी भयो विफल...
ओलीका पूर्व पिएसओको करोडौंको बंगला, होला त अनुसन्धान ?
एमालेमा फर्केका नेतालाई जिम्मेवारी दिन सकिदैन : रामकुमारी झाँक्री
जसले जतिसुकै प्रयास गरे पनि पाँच दलीय गठबन्धन फुट्दैन : प्रचण्ड
ओली र कार्कीबीच भेटवार्ता, संसदको गत्यावरोध अन्त्यको प्रयास
भरतपुर महानगरले दियो भरतपुर अस्पताललाई स्वास्थ्य सामग्री, सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख रेनु दाहालको निर्देशन
मुख्यमन्त्री शाक्य भन्छिन् : माधव नेपालले सरकारमा पठाएका हुन्
सरकार विस्तार गर्न नसक्नेले राजीनामा दिनुपर्छ : भिम रावल
चितवन हत्या प्रकरण : आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा झडप, पाँच प्रहरी र स्थानीय घाइते
कांग्रेसमा महाधिवेशन : निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित, २७ गते पालिका अधिवेशन असम्भव
धम्की दिनेविरुद्ध सरकारले थाल्यो सूक्ष्म निगरानी
बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री खनालले दिए राजीनामा
भारतका चर्चित कश्मीरी नेता गिलानीको निधन
एनआरएनए कोषाध्यक्ष पदमा लोकप्रसाद दाहालको उम्मेदवारी घोषणा
पहिराले कोशी राजमार्ग एक सातादेखि अवरुद्ध
बाढी पहिरो : तीन हजार घर डुबानमा, ९०० मा क्षति